Héctor Elizondo – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
American Gigolo (1980) Unicode အမရေိကနျပြျောတျောဆကျယောကျကြားတဈယောကျရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားပါ။ မိနျးမတှအေလိုကဖွညျ့ပေးရတဲ့သူတဈယောကျ လူသတျမူ့နဲ့ပတျသကျမိတဲ့အခါ ဘယျလိုတှဖွေဈလာမလဲ ? သူငယျခငျြးအခငျြးခငျြး သစ်စာဖောကျခံရတဲ့ အခါဘာတှဖွေဈမလဲ ? အပျေါပိုငျး ဗလာကငျြးလေးတှအေနညျးအကဉျြးပါလို့ သတိထားကွညျ့ဖို့လိုပါလိမျ့မယျ Zawgyi အမေရိကန်ပျော်တော်ဆက်ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ မိန်းမတွေအလိုကဖြည့်ပေးရတဲ့သူတစ်ယောက် လူသတ်မူ့နဲ့ပတ်သက်မိတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲ ? သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့ အခါဘာတွေဖြစ်မလဲ ? အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းလေးတွေအနည်းအကျဉ်းပါလို့ သတိထားကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
IMDB: 6.2/10 19,775 votes
Pretty Woman (1990) ဘီလျံနာချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်နဲ့ လမ်းပေါ်က ပြည့်တန်ဆာမလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း…. Pretty Woman (1990) သည် IMDb 7.0/10 Rotten Tomatoes 61% Metacritic 51% Google users 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Garry Marshall က ရိုက်ကူးထား၍ J.F. Lawton က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. တရားဝင်သော်လည်း အန္တရာယ်များတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက် အစောင့်အကြပ်ရှိဖို့လိုနေတဲ့အခါ လှပတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမလေးတစ်ဦးကို ငှားရမ်းရင်းနဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ… Credit Review
IMDB: 7.0/10 256,982 votes